समाचार - क्रिसमस २०२० को लागि सुझावहरू
क्रिसमस २०२० को लागि सुझावहरू
अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि यस वर्ष क्रिसमस धेरै फरक हुनेछ। यस लेखमा, हामी basic वटा आधारभूत सुझावहरू प्रदान गर्दछौं हाम्रो स्वास्थ्यलाई २०२० छुट्टीको मौसमको बखत र त्यसपश्चात सुधार गर्न।
प्रत्येक दिन, वैज्ञानिकहरूले SARS-CoV-2 कसरी काम गर्दछन् भन्ने बारे बढी सिकिरहेका छन्, र खोपहरू गुम्ने क्रममा छ। हो, २०२० चुनौतीपूर्ण भएको छ, तर हाम्रो शस्त्रागारमा चिकित्सा अनुसन्धानको साथ हामी COVID-१ defeat लाई हराउनेछौं।
जे भए पनि, हामीले COVID-19 लाई हराउनु अघि, हामीले यसको लागि श्रद्धा राख्नु पर्छ। तपाईका स्वस्थ रहनका लागि हामीले तल केहि सल्लाहहरू प्राप्त गर्‍यौं:
निद्राको उल्लेख नगरी मानसिक स्वास्थ्य बनाउने बारेमा कुनै लेख पूर्ण हुँदैन। हामी यसलाई हाम्रो आधुनिक, नियन-प्रज्वलित संसारमा चाहिने ठाउँ दिदैनौं। हामी सबैले अझ राम्रो गर्न आवश्यक छ।
निद्रा गुमाउनुले हाम्रो मुडमा दखल दिन्छ। यो सहज हो, तर यसलाई अनुसन्धान द्वारा पनि समर्थन गरिएको छ। उदाहरण को लागी, एक अध्ययन मा निष्कर्ष, "निन्दन हानि विघटनकारी घटनाहरु मा नकारात्मक भावनात्मक प्रभाव बढाउने जबकि लक्ष्य वृद्धि घटनाहरु को सकारात्मक प्रभाव को कम गर्न।"
अर्को शब्दमा, यदि हामी पर्याप्त निन्दैनौं भने, हामी नराम्रो महसुस हुने सम्भावना धेरै हुन्छ जब चीजहरू गलत हुन्छन्, र हामी राम्रा महसुस गर्न सक्ने सम्भावना थोरै हुन्छ जब ती राम्रो हुन्छन्।
त्यस्तै गरी, अर्को अध्ययनले पत्ता लगायो कि "व्यक्तिहरू बढी आवेगमा आउँछन् र छोटो निद्राको अवधि पछि कम सकारात्मक प्रभाव अनुभव गर्दछन्।" फेरि, कम निद्रा अवधि मिजास dampen देखिन्छ।
एक समयमा जब देशको मुड कम तनावमा छ, थोरै थप सुत्न हाम्रो पक्षमा तराजू टिप्न को लागी एक सरल तरीका हुन सक्छ।
यद्यपि यो ध्यान दिन लायक छ, निद्रा र मानसिक स्वास्थ्य बीचको सम्बन्ध जटिल र दुईपक्षीय हो - मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूले निद्राको गुणस्तरलाई असर गर्न सक्दछ, र निन्द्राको अभावले मानसिक स्वास्थ्यलाई बिगार्न सक्छ।
२. सक्रिय राख्नुहोस्
निद्राको रूपमा, कुनै पनि लेख जुन मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिनको लागि व्यायाम समावेश गर्नु पर्छ। तापक्रम घट्ने बित्तिकै बाहिरबाट जबरजस्ती गर्नु अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। वैज्ञानिकहरूले देखाए कि शारीरिक गतिविधिले छोटो र लामो अवधिमा दुवै मुडलाई बढावा दिन सक्छ।
१ 2019 2019 2019 मा प्रकाशित एक समीक्षाले उदाहरणका लागि, हृदय सम्बन्धी तन्दुरुस्ती र सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकारको जोखिमको बीचको सम्बन्ध भेट्टायो। त्यस्तै, २०१ 2018 मेटा-विश्लेषणले निष्कर्षमा पुग्यो कि "उपलब्ध प्रमाणहरूले शारीरिक गतिविधि उदासीनताको बिरूद्ध संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ भन्ने धारणालाई समर्थन गर्दछ।"
महत्त्वपूर्ण कुरा, व्यायामबाट मानसिक लाभ लिन हामीले-मिनेटको माईल चलाउन आवश्यक पर्दैन। २००० को एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि छोटो, १०-१-मिनेट पैदल हिडने मूड बढेको छ र शान्तता बढेको छ।
त्यसोभए यो केहि सरल छ, जस्तो कि तपाईको भान्छामा नाच्न वा तपाईंको कुकुरलाई अलि बढी हिँड्न, यो सबै गणना गर्दछ।
यो सत्य हो कि व्यायाम न त निन्द्राले साथी वा आफन्तबाट अ from्गालो बदल्न सक्दैन, तर यदि हाम्रो मुड क्षणिक रूपमा बढावा प्राप्त गरियो वा हाम्रो समग्र औसत मुडलाई जोड दिइयो भने यसले निराशालाई अझ राम्ररी व्यवस्थापन गर्न र यस गाह्रो वर्षलाई पुन: फर्म्याम गर्न मद्दत गर्दछ।
COVID-19 को बारे मा सूचित रहनुहोस्
तपाईंको इनबक्समा सीधा उपन्यास कोरोनाभाइरसमा नवीनतम अपडेट र अनुसन्धान-समर्थित जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
Addressing. एकाकीपनलाई सम्बोधन गर्दै
धेरै व्यक्तिको लागि, एकाकीपन पहिले नै २०२० को महत्त्वपूर्ण विशेषता रहँदै आएको छ। क्रिसमसको अवधिमा साथीहरू र परिवारमा मनन गर्दा एक्लोपनको भावना बढ्न सक्छ।
यो लड्न, सम्पर्क बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। यो एक साधारण फोन कल वा एक भिडियो च्याट हो, केहि कुराकानी तालिका गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईं एक्लो महसुस गर्नुहुन्न। यदि यो तपाईंको क्षेत्रमा सुरक्षित छ र अनुमति छ भने, बाहिर कतै बाहिरको साथीलाई भेट्नुहोस् र हिंड्नुहोस्।
अरूको साथ जाँच गर्नुहोस् - ईमेलहरू, पाठहरू, र सोशल मिडिया यस समयमा उपयोगी हुन सक्छ। डूमस्क्रोलिंगको सट्टामा, "तपाइँ कस्तो हुनुहुन्छ?" पठाउनुहोस् कसैलाई तपाईले याद गर्नुभयो तिनीहरूले सम्भवतः तपाइँलाई पनि याद गर्नेछन्।
कब्जामा रहनुहोस्। खाली समय बिस्तारै सार्न सक्छ। नयाँ पोडकास्ट फेला पार्नुहोस्, नयाँ वा पुरानो गीत सुन्नुहोस्, त्यो गितार छान्नुहोस्, फेरि रेखाचित्र सुरू गर्नुहोस्, नयाँ सीप सिक्नुहोस्, वा अरू केहि पनि। एक व्याप्त र संलग्न दिमाग एकाकीपन मा ध्यान कम सम्भावना छ।
एउटा भर्खरको अध्ययनले पत्ता लगायो कि जो मानिसहरू एक रमाईलो कार्यमा संलग्न छन् र प्रवाहको अवस्थामा प्रवेश गर्छन् तिनीहरू लकडाउन र क्वारन्टिनेन्सको अवधिमा राम्रो देखिन्छन्। लेखकहरू लेख्छन्:
"बढी प्रवाह रिपोर्ट गर्ने सहभागीहरूले बढी सकारात्मक भावनाहरू, कम गम्भीर उदासीन लक्षणहरू, कम एकाकीपन, बढी स्वस्थ व्यवहार, र कम अस्वस्थ व्यवहारहरू पनि रिपोर्ट गरे।"
E. खाने र पिउने राम्रो तरिकाले
क्रिष्टमस अत्यधिक मात्राको साथ सानो भागमा सम्बन्धित छ। मलाई लाग्दैन कि मानिसहरु लाई टर्की सेवन घटाउन सबै वर्षहरु को २०२० मा आशा गर्नु उचित वा उचित हुन्छ।
त्यो भनिएपछि, त्यहाँ बढ्दो प्रमाणहरू छन् जुन हामी खान्छौं त्यसले हाम्रो मनोभावलाई असर गर्छ। उदाहरणका लागि, BMJ मा देखा पर्ने भर्खरको समीक्षा समाप्त हुन्छ:
"भूमध्य आहार जस्तो स्वस्थ खाने बानीहरू पश्चिमी डाईट जस्ता 'अस्वस्थ' खाने बानीहरू भन्दा राम्रो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ।"
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो सुनिश्चित गर्दै कि हामी लिड-अपमा राम्रोसँग खानेछौं र क्रिसमसको पछिका दिनहरूले हामीलाई स्थिर दिमागमा मद्दत गर्दछ।
प्रत्येक दिन हाम्रो उत्तम कथाहरूको गहिराइ, विज्ञान-समर्थित शीर्षलेखहरू अपेक्षा गर्नुहोस्। ट्याप गर्नुहोस् र तपाईंको जिज्ञासालाई सन्तुष्ट राख्नुहोस्।
Expectations. अपेक्षाहरू पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
सबै मानिस एकै पेजमा हुँदैन जब यो महामारीको लागि आउँदछ। केहि व्यक्तिहरू अझै पनि ढालमा हुन सक्छन्, जबकि अन्यहरू "महामारीको थकान" मा दबिएका हुन सक्दछन् र समय भन्दा पहिले नै सामान्यमा फर्कन्छन्। अरूले अझै पनि "स्केडेडेमिक" जस्ता सर्तहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् र मास्क लगाउन अस्वीकार गर्दछन्।
केहि परिवारका सदस्यहरूले पारिवारिक खानाको लागि जोड दिइरहेका हुन सक्दछन्, जस्तै २०१ ant को लामो टाढाका दिनहरू। अन्य, सम्वेदनशील रूपमा, जुम-आधारित भोजन योजनाको दृश्यमा हुन सक्छन्।
स्थितिमा यी भिन्नताहरूमा निराशा र अतिरिक्त तनाव उत्पन्न गर्ने सम्भाव्यता छ। परिवारका सदस्यहरूसँग उनीहरूले यस बर्ष के आशा गर्न सक्छन् भन्ने बारे स्पष्ट र स्पष्ट छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
याद गर्नुहोस्, कुनै भाग्यको साथ, अर्को क्रिसमसले सामान्यताको केही प्रकारमा फर्किनेछ। आशा छ, हामी केवल यो असामान्य र असहज क्रिसमस एक पटक मात्र सहने छौं। यदि तपाईं कसैको प्रस्तावित योजनामा ​​सहज हुनुहुन्न भने, “होईन” भन्नुहोस्। र आफ्नो बन्दुक मा छडी।
अमेरिकाको धेरै तिर केस संख्याहरूमा स्पाइकको साथ, सबै भन्दा राम्रो विकल्प मानव सम्पर्कलाई सकेसम्म सीमित गर्नु हो।
यद्यपि कानूनहरू, नियमहरू र नियमहरू बिभिन्न क्षेत्रहरूको बिच फरक हुन्छन्, जब यो तल आउँदछ, प्रत्येक व्यक्ति आफैले कानून भित्र कसरी काम गर्ने भन्ने बारे आफ्नै निर्णय गर्नु पर्दछ। तपाईको आफ्नै मानसिक स्वास्थ्यलाई जोगाउन तपाईले नै निर्णय लिनुहोस् र तपाईलाई केहि जोखिमपूर्ण ठान्ने कुरामा केहि गर्न रेल नबस्नुहोस्।
यस वर्ष क्रिसमसको आनन्द लिने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका, दुर्भाग्यवस, यसलाई वस्तुतः गर्नु हो।
व्यक्तिगत रूपमा, माथि उल्लिखित सल्लाहहरूले क्रिसमसबाट हामीले अपेक्षा गरेको राम्रो समयहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्। यद्यपि, यदि हामी सहि खाने, दाहिने सुत्ने, र वरिपरि घुम्न अधिक प्रयास गर्यौं भने संचयी प्रभावले केही फाइदाको लागि पर्याप्त हुन सक्छ।
याद गर्नुहोस्, हामी सिधा घरमा छौं। पुग्नुहोस् र साथीहरू र परिवारसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईं कम महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। अनौंठो कुरा तिनीहरू पनि कम महसुस गर्दै छन्। आफ्ना भावनाहरूको बारेमा कुरा गर्न कहिल्यै नडराउनुहोस्। कोहीले पनि छुट्टीको मौसममा अपेक्षा गरेका छैनन्।
एक एफडीए आधिकारिक-होम कोविड - १ test परीक्षणको लागि आदेश दिनुहोस्
तपाईं कोविड -१ at-घर टेस्ट को माध्यम बाट योग्य हुनुहुन्छ कि भनेर निर्धारण गर्न अनलाइन मूल्यांकन लिनुहोस्।
अन्तमा, हामीबाट शुभकामना!
हामी तपाइँलाई शान्तिमय, रमाईलो र स्वस्थ क्रिसमसको कामना गर्दछौं!